05/04/2018 - Page 4 sur 4 -
Zandary namoy ny ainy : Natao veloma farany teny amin’ny toby Ratsimandrava
Notanterahina omaly tokony ho tamin’ny 10 ora sy sasany maraina teny amin’ny toby Ratsimandrava, ny fanaovam-beloma ara-miaramila ny vata mangatsiakan’ny GST Nomenjanahary Bienvenu José Rolland, ilay zandary mpiana-draharaha lavon’ny dahalo tany amin’ny kaominina Makaraingo, distrikan’Ambatomainty …Tohiny
Taorian’ ny filankevitry ny minisitra notanterahina omaly no nanendrena ny kaomandy vaovaon’ ny zandarimariam-pirenena, ny jeneraly Andrianjaka Njatoarisoa, izay misolo toerana ny jeneraly Jean de Dieu Ramiandrisoa. Ny Jeneraly Andrianjaka Njatoarisoa moa raha tsiahivina dia …Tohiny
Tonga nitsidika ny lapam-panjakana Iavoloha ireo mpianatra miisa 97 amin’ny kilasy voalohany amin’ny sokajy L sy S avy amin’ny lisea tsy miankina katolika Conception ao Morondava, niaraka tamin’ireo mpanabe azy ireo omaly 4 aprily. Fotoana …Tohiny
«Olona mitovy !»
Niteraka resabe ilay horonantsary mandeha amin’ny facebook ahitana solombavambahoaka maromaro. Nisy namoaka tany amin’ny tambazotra io horonantsary nalaina tamin’ny finday io, nifanandrify indrindra tamin’ny fandaniana ireo volavolan-dalàna mifehy ny fifidianana amin’ny ankapobeny farany teo teny …Tohiny
Notsenaina tamim-pifaliana. Tamin’ny ankapobeny, dia samy nanana ny fomba nentiny namarana ny taona 2017 sy nandraisana ny taona vaovao 2018 ny tsirairay sy ny isam-pianakaviana. Ho an’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, dia nanankina ny taona vaovao ...Tohiny